Burundi Oo Ku Hanjabtay Inay Ciidammadeeda Kala Bixi Doonto Soomaaliya | Salaan Media
Burundi Oo Ku Hanjabtay Inay Ciidammadeeda Kala Bixi Doonto Soomaaliya
February 22, 2019 | Published by: cabdikhaaliq diiriye
Muqdisho (Salaanmedia.com)_ Dowladda Burundi ayaa ku hanjabtay inay la bixi doonto dhammaan ciidammadeeda shanta kun ee ka jooga Soomaliya, haddii Midowga Afrika uu ku adkeysto kunka ciidammada Burundi ee laga saarayo Soomaaliya dhammaadka bishan.
Shan dal oo Afrikaan ayay ciidammo ka joogaan Soomaaliya. Inkastoo ay jirto walaac laga muujinayo in Soomaaliya ay weli ka fogtahay inay cagaheeda isu taagto, haddana heshiiska Qaramada Midoobay ayaa dhigaya in ciidammada nabad ilaalinta ee tiradoodu ay ka badan tahay labaatan kun ay tahay inay isaga baxaan dalka isla markaana ay ammaanka ku wareejiyaan ciidamadda Soomaaliya. Tifaftiraha BBC ee Afrika, Will Ross, ayaa ku soo warramaya in qorshaha bixitaanka ciidammada uu yahay mid lagu muransan yahay.
Arrimaha ay isku haystaan waxaa ugu weyn dhaqaalaha. Bil waliba in ka badan labaatan kun oo ah ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee la dagaallama Al-shabaab, ayaa qofkiiba wuxuu qaataa lacag ka badan kun doollar.
Mushaarka la siiyo ciidammadaasi, oo uu xilligan bixiyo Midowga Yurub, ayaa si toos ah waxaa loogu marsiiyaa xukuumadaha ay ka socdaan. Qayb ayaa laga jaraa lacagtaasi kahor inta aan la siinin ciidammada.
Xukuumadda Burundi ayaa caddaalad daro ku tilmaantay in qorshaha haatan lagu doonayo in kunka ciidan ee ugu horreeya ee Soomaaliya laga saarayo ay dhammaan ka soo jeedaan Burundi, waxay sheegtay inay lumin doonto in ka badan hal milyan oo doollar bil gudaheed.